Machina Fekitori | China Machina Vagadziri, Vatengi - Chikamu 2
Chinyorwa chekuchinjisa muchina, giya hob rinoshandiswa kugadzira nzira yekuzevha cylindrical spur giya, helical giya uye spline, sprocket, nezvimwewo. Inogona zvakare kutora nzira yechinyorwa radial feed yekugadzirisa yakajairwa honye giya. Odha zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi, zvikamu zvakakosha, uchishandisa tangential feed hobbing worm giya.
Muchina uyu unokodzera batch, diki batch uye kuroora kugadzirwa uye kugadzirisa cylindrical giya nehonye giya, uye imwe paramende yedhira giya, spline hob inowanikwawo yekukamura mupumburu kutema mapfupi anopfuura 6 mazino, meno spline mugodhi; Unogona zvakare kushandisa iyo sprocket hob roll yekucheka machira.
Icho chitsva chitsva chezvinhu zvakawandisa zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvinogadzirwa zvine chekuita nematanho epasi rose. Iyo muchina chishandiso chemusoro, rocker ruoko uye ikholamu zvakagadziriswa pamurume. Chokurukisa chinotenderera kumberi nekumashure, chimira (brake), uye shanda nemubato mune kwazvakarerekera. , yakanyatsoita mushe, kuomarara kwakanaka, hupenyu hwakareba uye zvichingodaro.Used yekuchera, kudzoreredza, kudzoreredza, kurova uye kufinha.
Injiniya michina inobhowa muchina inoshandiswa kune ese marudzi ekuvaka michina chimiro pane shaft pini gomba, muhombe gomba, hingedhi gomba mushure mekusimbisa kugadzira, kana mushure mekumisikidza kwekuisa, excavator, loader, muchina, crane uye imwe yepakati gomba kugadzirisa uye kugadzirisa .
TPX yakateedzana ye Horizontal Boring Machine mune hwetsika hunofinha kugadzirisa dhizaini, chishandiso chishandiso chinogona kushandiswa zvakanyanya muBhokisi Muviri, Shell, Injini Base… zvikamu zvakakura zvinogadzira Kuchera, Kufinha, Kuputira, Reaming, Spot-yakatarisana, Kugaya flat, Turning tambo yekucheka, nezvimwewo Inonyanya kukodzera hombe yepakati-saizi yebhokisi zvikamu uye zvakashata zvinofinha, Kupedza kufinha, kugaya uye kumwe kuita machining maitiro.
Muchina uyu unokodzera simbi yekumhanyisa simbi uye alloy yekucheka maturusi, Hardware yesimbi simbi, isina simbi simbi uye zvimwe zvisiri-zvesimbi zvikamu mukati nekunze kwesirinda, kumagumo, kugunun'una kwekupedzisira kupera machining, nezvimwe.
Iyi nhevedzano yemuchina maturusi inogona kushandiswa mukuwedzera iwo chaiwo masisitimu emuchina, uye inogona kushandiswa kune yakashata uye yakanaka machining yemukati neyekunze cylindrical pamusoro, koni pamusoro, kumagumo kumeso, kucheka groove, nezvimwe.
<< <Yapfuura 123 Inotevera> >> Peji 2/3